Webhu 2.0 Ruzivo Rwakawanda | Martech Zone
Webhu 2.0 Ruzivo Rwakawanda
Chitatu, November 18, 2009 Chipiri, May 6, 2014 Adam Mudiki
Kukundwa nehuwandu hweruzivo, maapplication, uye mhinduro nyowani dzinouya kwauri? Ndinoziva kuti ndiri! Ndishevedze zvakapusa, asi zvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura nhasi zvinogona kunge zviri nhau dzekare kune vakawanda, asi neruzivo rwakawanda kunze uko, ndiani anogona kunyatso chengeta. Kunze kwekunge uri Douglas Karr or Kyle Lacy - izvo nenzira, ini ndine chokwadi chekuti havarare!
Ini ndatanga kushandisa mamwe matsva emasangano maturusi ekuchengeta zvese zvemashoko mukutarisa. Heano mashoma mashoma andinoona achibatsira:
naka: Okay, okay, ndoziva vazhinji venyu muchiverenga izvi vanogona kunge vatoziva nezve Delicious. Ini ndakaziva nezvazvo zvakare, asi kudzamara nyika yekudyidzana kugovana yakachinja, haina kumbobvira yaita zvakanyanya. Ini ndinoda kuti ndinogona kuisa bhukumaki uye kumaka kure uye zvisinei kuti ndeapi macomputer andiri, kwandinenge ndiri, ndinogara ndine zvandinoda ipapo ipapo. Pasina kutaura nzvimbo inokurumidza uye yakapusa yekuwana ese eaya ma link andinoda kurangarira. Senge ichangoburwa blog post, webinar kukoka, kana kunyangwe chinyorwa.
Picnik: Zvekare, vashambadziri vanhu vakasika uye isu tinofanirwa kukwanisa kugadzira mupiniki. Ini ndinogona dhizaini pazvinenge zvichidikanwa, asi kana ini ndichida chimwe chinhu nekukurumidza, zvakapusa, uye zvakapusa… ndinosarudza picnik! Kunyanya kune iwo mapurojekiti iwe aunoda kunongedza zvishoma pasina yakawanda yehuropi simba. Dhawunirodhi yavo iri nyore kushandisa uye zvakare senge chero yewebhu-yakavakirwa app ... .unokwanisa kuwana ako pics chero kupi.
Feedburner: Parizvino ndine chokwadi chekuti urikufunga, ibwe ripi raange ari pasi paro? Kwete zvakanyanya… .rangarira, ndiri mushambadzi akabatikana ndichizvitutumadza zvese AZ! Ini ndinoda nekukurumidza, ndinoda yakapusa, uye ndinoda kudzokera kwazviri kana ndiri mune pinch. Kunyange ini ndagara ndichiziva uye ndichida feedburner yeiyo RSS kugona, asi ini ndichangobva kudzidza nezve kugona kupinza fomu reemail mublog rako futi. Uye ipapo metric, inotonhorera kwazvo kuti ini ndichave neese aya maturusi ese ari mukati meangu Google chikuva mazuva ese.
Google Apps: Ini handidi kurira semunhu anozvipira paGoogle nekuti sevamwe vatengesi vazhinji ndagara ndichivhiringidzika navo kungoedza kusimudzira kutsvaga kwangu. Nekudaro, kuDelivra, isu tese tinoshanda kubva kuGoogle Apps kune zvese uye nepo ini ndine chokwadi chekuti mari yekuchengetedza yakakura kana ichienzaniswa necomputer software, ndinoshamiswa nemhando dzakasiyana dzekushandisa kubva kutsamba, karenda, nzvimbo (dzatinoda!), Zvinyorwa, unozvitumidza. Iye zvino ndinoziva kuti haina kukwana, asi kuwanikwa uye chokwadi chekuti hachipunzike kamwe pazuva chakanditengesa.
SmartSheet: Iyi ingangoita yega app ingangodaro isingazive nevazhinji venyu. Ini ndinoda SmartSheet sezvo ini ndichigara ndichigadzira zvinyorwa. Ndezvipi zvimwe zvandinoteedzera kuzviuru zvezvinhu zvandinoita mazuva ese? Chero zvazvinoitika, iko kunyorera kunondibatsira kubata akawanda eku-ita uko kwandinogona kuzvimisikidza nekutanga, kugovana nevamwe, kugadzirisa chero, kudhinda kana kuwana chero kwandingave ndiri.
Ikoko unayo, zvishandiso zvishanu zvakapusa zvinonditadzisa kubva mukukundwa neruzivo rwakawanda. Kana iwe uri mushambadzi ane nzara kana wakangoshaya nguva yekuziya nenzara, sanganisira mamwe emidziyo iyi mubhegi rako remanomano uye iwe unozokwanisa kubata mutoro nehukuru hwe nyore. Kana zvisiri, funga nezve iwo matsva hyperlink kune izvo iwe zvaunoziva uye zvaunoda.
Kurudzira Brand yako kuConferensi neLaptop Ganda
Nov 19, 2009 pa2: 09AM
Ini ndinoda Diigo kune Delicious kunyangwe Google Sidewiki iri kutanga kutora pfungwa dzangu kune ayo annotation kugona ayo akafanana (anofungidzirwa ASI ane simba) kune avo veDiigo.
Nov 19, 2009 pa4: 05AM
Yakanakisa ipfupi runyorwa Carissa. Inoratidza muchidimbu mapuratifomu akasiyana isu vatengesi isu tese kuti tiite zvinhu zvedu. Ndiri kutarisa SmartSheet. Kunge drthomasho, ndiri kudawo Diigo kuna Delicious nekuti unogona kunyora manotsi kumapeji acho. Matagi haana kushata, asi neDiigo ndinogona kushandisa ma tag ese uye "stickies" pamapeji kutarisa chimwe chikamu chezvose zvakachengetedzwa zvemukati. Ndokuona zvakare munguva pfupi! –Pauro
webhu dhizaini kambani
Gumiguru 3, 2011 pa 8:15 AM
Aya maturusi anobatsira chaizvo.Ndinovimba munhu wese achazonyatsotora ichi chinodzidzisa posvo uye voshandisa izvi zvakakosha maturusi kuita kuti saiti ibudirire.